BioBar စျေး - အွန်လိုင်း BIOB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BioBar (BIOB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BioBar (BIOB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BioBar ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BIOB – BioBar
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BioBar တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BioBar များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BioBarBIOB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000842BioBarBIOB သို့ ယူရိုEUR€0.000712BioBarBIOB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000642BioBarBIOB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000766BioBarBIOB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00751BioBarBIOB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00531BioBarBIOB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0186BioBarBIOB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00313BioBarBIOB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00112BioBarBIOB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00118BioBarBIOB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0186BioBarBIOB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00653BioBarBIOB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00453BioBarBIOB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0631BioBarBIOB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.142BioBarBIOB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00116BioBarBIOB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00129BioBarBIOB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0262BioBarBIOB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00585BioBarBIOB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0897BioBarBIOB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.999BioBarBIOB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.325BioBarBIOB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0616BioBarBIOB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.023
BioBarBIOB သို့ BitcoinBTC0.00000007 BioBarBIOB သို့ EthereumETH0.000002 BioBarBIOB သို့ LitecoinLTC0.00002 BioBarBIOB သို့ DigitalCashDASH0.000009 BioBarBIOB သို့ MoneroXMR0.000009 BioBarBIOB သို့ NxtNXT0.0657 BioBarBIOB သို့ Ethereum ClassicETC0.000124 BioBarBIOB သို့ DogecoinDOGE0.243 BioBarBIOB သို့ ZCashZEC0.00001 BioBarBIOB သို့ BitsharesBTS0.0259 BioBarBIOB သို့ DigiByteDGB0.0269 BioBarBIOB သို့ RippleXRP0.00299 BioBarBIOB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 BioBarBIOB သို့ PeerCoinPPC0.00279 BioBarBIOB သို့ CraigsCoinCRAIG0.384 BioBarBIOB သို့ BitstakeXBS0.0359 BioBarBIOB သို့ PayCoinXPY0.0147 BioBarBIOB သို့ ProsperCoinPRC0.106 BioBarBIOB သို့ YbCoinYBC0.0000005 BioBarBIOB သို့ DarkKushDANK0.27 BioBarBIOB သို့ GiveCoinGIVE1.82 BioBarBIOB သို့ KoboCoinKOBO0.192 BioBarBIOB သို့ DarkTokenDT0.000776 BioBarBIOB သို့ CETUS CoinCETI2.43
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:05:02 +0000.